Mhedziso kutanga Guide kuna Google Analytics - China Litbright Candle (shijiazhuang)
Kana usingazivi chii Google Analytics ndiko, hamuna yakaiswa pamusoro website yako, kana ndakagadza asi haana kutarira mashoko ako, zvino this post iri kwauri. Nepo zvakaoma vazhinji kutenda, kuchine Websites kuti havasi kushandisa Google Analytics (kana chero analytics, nokuda kwaizvozvo) kuyera motokari yavo. In this post, tave kutarisa Google Analytics kubva Mhedziso kutanga pfungwa. Sei uchida izvozvo, kuti uzviwane, kuishandisa, uye workarounds kuti zvinozivikanwa.
Sei ose muridzi Website inoda Google Analytics
Une Blog? Une kunofambira mberi Website? Kana mhinduro iri hongu, kana vari voga kana kuti bhizimisi kushandiswa, ipapo unofanira Google Analytics. Heano shomanana mibvunzo yakawanda pamusoro website yako kuti unogona kupindura uchishandisa Google Analytics.
Vanhu vangani ashanyire Website yangu?
Ko vashanyi dzangu kurarama?
Ndinoda Mobile-ushamwari Website?
Chii Websites kutumira motokari kuti website yangu?
Chii Marketing nzira kudzinga zvikuru motokari kuti website yangu?
Ndezvipi mapeji website yangu ndiyo inonyanya kufarirwa?
How vashanyi vakawanda I dzikwanise anotungamirira kana vatengi?
Kupi vashanyi dzangu rokutendeutsa dzinobva muende website yangu?
Ndingavandudza sei Website wangu nokukurumidza?
Chii Blog kugutsikana vaenzi angu sezvinoita vakawanda?
Kune, mibvunzo yokuwedzera yakawanda kuti Google Analytics anogona kupindura, asi izvi ndivo vari hunonyanya kukosha kupfuura Website varidzi. Zvino ngatitarise sei unogona kuwana Google Analytics website yako.
How yokugadza Google Analytics
Chokutanga, unofanira kuva Google Analytics nhoroondo. Kana uine chikuru Google nyaya kuti kushandisa mamwe mabasa akafanana Gmail, Google Drive, Google Calendar, Google+, kana YouTube, unofanira kumisa yako Google Analytics kushandisa kuti Google account. Kana unofanira pave nerimwe idzva.
Izvi zvinofanira kuva Google nhoroondo waronga kuchengeta nokusingaperi uye kuti chete iwe kuwana. Unogona kugara kupa kuwana kwenyu Google Analytics vamwe vanhu pasi mumugwagwa, asi iwe haudi mumwe kuti kudzora pamusoro payo.
Big muromo: musarega munhu wako (wako padandemutande mugadziri, Web yokuvaka, padandemutande hondo, SEO munhu, etc.) nokusika Website wako Google Analytics nokuda pasi wavo Google nhoroondo pachavo saka vanogona 'kubata' iwe. Kana iwe uye ichi munhu chikamu nzira vachabata wako Google Analytics mashoko navo, uye muchava kutanga zvose pamusoro.
Wakaisa nhoroondo yako uye pfuma
Wangova une Google nyaya, munogona kuenda Google Analytics uye tinya Sign kupinda Google Analytics bhatani. Uchabva vachikwaziswa nemasitepisi vatatu unofanira kutora kumisazve Google Analytics.
Mushure iwe tinya Sign Up bhatani, iwe uchava kuzadza mashoko website yako.
Google Analytics anopa hierarchies kuronga nhoroondo yako. Unogona kuva Google Analytics nhoroondo anosvika 100 pasi mumwe Google account. Unogona kuva kusvika 50 Website ehupfumi pasi mumwe Google Analytics nhoroondo. Unogona kuva kusvika 25 maonero pasi rimwe Website pfuma.
Heino mienzaniso mishomanana.
Muenzaniso 1: Kana uine mumwe Website, iwe chete vanoda mumwe Google Analytics Nhoroondo chete Website pfuma.
Muenzaniso 2: Kana uine Websites maviri, akadai rimwe renyu mabhizimisi uye mumwe wenyu pachako kushandiswa, ungada kusika nhoroondo mbiri, zita rimwe "123Business" uye mumwe "Personal". Ipapo iwe uchamutsa chako Website bhizimisi pasi 123Business nhoroondo uye zvaunoita Website pasi kwenyu nhoroondo Personal.
Muenzaniso 3: Kana uine mabhizimisi akawanda, asi asingasviki 50, uye mumwe nomumwe wavo ane Website, ungada kuvaisa zvose pasi Business nhoroondo. Zvadaro vane Personal nhoroondo yako pachako Websites.
Muenzaniso 4: Kana uine mabhizimisi akawanda uye mumwe nomumwe wavo ane hwakawanda Websites, akasanganiswa anopfuura 50 Websites, ungada kuisa basa nechimwe pasi yayo nhoroondo, akadai 123Business nhoroondo, 124Business nhoroondo, uye zvichingodaro.
Hapana zvakanaka kana zvakaipa nzira akamisa Google Analytics wako nhoroondo-chiri nyaya sei uchida kuronga nzvimbo yenyu. Unogona kugara rename nhoroondo yako kana zvivako mumugwagwa. Cherechedza kuti haugoni kuita pfuma (Website) kubva Google Analytics nhoroondo kune mumwe-imi aizofanira akamisa pfuma itsva pasi nyaya itsva uye vanorasikirwa nhoroondo mashoko iwe inounganidzwa kubva pakutanga pfuma.
Nokuti Mhedziso kutanga richitungamirira, tave kufunga uine chimwe Website uye chete vanoda mumwe maonero (the default, zvose mashoko maonero. The setup taitsvaka chinhu chakadai.
Pasi rino, uchawana tsanangudzo kuti kugadzira apo Google Analytics mashoko ako anogona kugoverwa.
Gadza yenyu Tracking yekubvuma
Kamwe iwe apera, iwe uchava tinya Wana Tracking ID bhatani. Uchawana munhu Popup of Google Analytics mashoko uye mamiriro, izvo unofanira kubvumirana. Ipapo uchawana wako Google Analytics romutemo.
Izvi zvinofanira kuiswa pa ose peji iri website yako. Installation achavaponesa chii mhando website imi. Somuenzaniso, ndine WordPress Website ndoga nzvimbo uchishandisa Genesis Pakuumbwa. mugwaro iri ane yakananga nzvimbo kuwedzera Header uye footer mumanyoro kuti Website yangu.
Nerumwe, kana uine WordPress woga achazoburuka, unogona kushandisa Google Analytics kubudikidza Yoast plugin yokugadza bumbiro wako nyore pasinei dingindira kana framework yauri kushandisa.
Kana uine Website yakavakwa HTML mafaira, uchawedzera pamusoro Tracking remitemo pamberi </ musoro> Tag pamusoro mumwe nomumwe mapeji yenyu. Unogona kuita izvi nokushandisa purogiramu chinyorwa mupepeti (akadai TextEdit nokuda Mac kana nebhuku rokunyorera kuti Windows) uye zvadaro uchiisa faira yako padandemutande hondo kushandisa chirongwa ftp (zvakadai asFileZilla).
Kana uine Shopify e-zvokutengeserana chitoro, uchaenda yako Online Store Kurongwa namatidza yenyu Tracking yekubvuma apo kutaurwa.
Kana uine Blog musi Tumblr, uchaenda Blog renyu, tinya Edit Theme bhatani kumusoro kodzero Blog renyu, agozopinda chete Google Analytics ID muzviruva dzenyu.
Sezvaunogona kuona, kugadzwa Google Analytics dzinosiyana-siyana inobva pachikuva iwe kushandisa (kugutsikana utariri hurongwa, Website muvaki, e-commerce software, etc.), musoro iwe kushandisa, uye plugins iwe kushandisa. Unofanira kukwanisa kuwana mirayiridzo nyore kuisa Google Analytics chero Website nokuita Utava kutsvaka pachikuva yenyu + sei kuisa Google Analytics.
Mushure iwe gadza rako Tracking bumbiro iri website yako, uchada kugadzira chiduku (asi unobatsira chaizvo) ronyura website yako kuti Profile musi Google Analytics. Uyu Zvinangwa zvako zvakamira. Unogona kuwana parutivi nekudzvanya pamusoro Admin kubatana pa pamusoro wako Google Analytics uye ipapo nekudzvanya pamusoro Zvinangwa pasi website yako Maonero mbiru.
Zvinangwa achakuudza Google Analytics kana chinhu chinokosha chakaitika musi website yako. Somuenzaniso, kana uine Website apo iwe chamutsa anotungamirira achishandisa kuonana chimiro, uchada kuwana (kana nokusika) a mazvita peji kuti vaenzi vanoguma pamusoro kamwe ivo pasi zvavo kuonana ruzivo. Kana, kana uine Website apo iwe kutengesa zvigadzirwa, uchada kuwana (kana nokusika) wokupedzisira mazvita kana nokusimbisa peji vashanyi kunyika pamusoro kamwe vachinge vapedza nokutengeserana.